PSG Oo Ku Dhow Saxiixa Qadka Dhexe Liverpool Wijnaldum.
HomeHoryaalka FrancePSG oo ku dhow Saxiixa Qadka dhexe Liverpool Wijnaldum.
February 27, 2021 Horyaalka France, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kooxda liverpool ayaa u muuqata inay lumin doonaan qadka dhexe wiliva si bilaash ah xagaagan Paris ayaana ah kooxda heli karta xidiga reer holland ee wijnaldum maadama kooxaha kale ay ka gaabiyeen doonistoodii sida laga soo xigtay ESPN.
Xiddiga qadka dhexe ee Liverpool Georginio Wijnaldum ayaa qarka u saaran inuu noqdo mid xor ah xagaagan isagoo ka hor istaagaya heshiis labaad oo uu la galo kooxdiisa haatan, ESPN ayaa soo warinaysa inuu u dhaqaaqi doono Paris Saint-Germain, kaasoo aan ka fiirsan doonin inuu ku biiro Paris.
Kooxo kale oo barcelona qeyb ka tahay ayaa rabaan ineey ka faa’iideystan qadka dhexe ee liverpool iyo nederlands maamulaha waqtigan ee barcelona Ronald keoman ayaa la dhacsan qaab ciyaaredka xidigaan isagoo inta uusan bilaaban xaagagan doonayey waloow uu ku guul dareystay.